Breaking News: Abdi Warsame iyo Tarjubaanada Somaaliyeed Oo Guul Weyn Soo hoyay. - Wargeyska Faafiye
Home 2016 May 23 .Warka Breaking News: Abdi Warsame iyo Tarjubaanada Somaaliyeed Oo Guul Weyn Soo hoyay.
Breaking News: Abdi Warsame iyo Tarjubaanada Somaaliyeed Oo Guul Weyn Soo hoyay.
May 23, 2016 · by	Liban Farah ·
Minneapolis: Gudoomiyaha degmada 6’aad Mudane Abdi Warsame ayaa labadii isbuuc lasoo dhaafay dedaal dheer u galay inuu hor-istaago sharciga (SF2177) oo horyaalay labada aqal ee sharci dejinta gobolka Minnesota. Sharcigaan oo la horgeeye mudanaayasha Barlamaanka Gobolka Minnesota ayaa culays iyo xayirad saari lahaa tarjubaanada caafimaadka ka shaqeeya gobolka Minnesota.
Abdi Warsame oo la hadlaye Xildhibaanadii soo bandhigay xeerka SF2177 ayaa hadaladiisi waxaa kamid ahaa; “Xeerkaan wuxuu shaqo ka fadhiisinayaa boqolaal ruux oo Somaaliyeed, xilli qowmiyadaydi ay 22% shaqa la’aan yihiin.”
Xeerkaan ayaa saameyn ku yeelan lahaa dhaqaalaha ay haatan qaataan tarjubaanada gobolka ay Somaalidu qayb lixaad ka tahay, islamarkaana shuruudo adag kusoo rogi lahaa mulkiilayaasha iyo tarjubaanada madax banana.
Abdi Warsame oo kaashanaya shaqaalaha magaalada Minneapolis ee iskaashiga dowladaha iyo waliba tarjubaanada iyo mulkiilayasha Somaaliyeed ayaa shirar qaas la yeeshay Xildhibaanad labada xisbi. Mudanaha ayaa sharaxay saa’maynta ay ku yeelanayso qowmiyada Somaalida islamarkaana cadeeye in qowmiyada uu matalo aan waxba laga weydiin sharcigaan.
Dedaal dheer ka gadaal, Abdi Warsame iyo tarjubaanadii garabkiisi ahaa ayaa ku guulayste in sharcigaasi aan la meel marin. “Waxaa mahad leh Ilaahay iyo gabdhihii iyo wiilashii tarjubaanada oo muujiyey isku duubni iyo deedaal,” ayuu yiri Mudane Abdi Warsame.
Si kastaba ha ahaatee, arintani ayaa guul weyn u ah tarjubaanada Somaaliyeed oo horay uga digay khatarta sharcigaasi lasoo bandhigay. Abdi Warsame ayaa kamid ah gudoomiyayaasha degmooyinka magaalada Minneapolis islamarkaana ah xubin katirsan gudiga iskaashiga dowladaha ee magaaladaasi.
Musharraxiin tanasul sameeyay
Arday toogasho lagu dilay.
Heavy fighting near seaport of Benghazi, navy ship hit
A Somali Lesbian mother kills her lover's mother
Kismaayo: Hub iyo gaadiid la soo bandhigay